Gabdho ku lebistay Calanka Soomaaliya oo muddo Toddobaad ka badan u xiran Maamulka Somaliland - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Gabdho ku lebistay Calanka Soomaaliya oo muddo Toddobaad ka badan u xiran Maamulka Somaliland
Maamulka Somaliland ayaa lagu eedeeyay in 8 gabdhood oo dhigta Dugsiyada sare iyo Jaamcadaha magaalada Laascaanood uu u xiray inay ku lebisteen Calanka Soomaaliya.
Gabdhahan ayaa lagu qabtay magaalada Laascaanood ee Gobolka Sool, iyadoo markii danbe loo gudbiyey Xabsiga Magaalada Berbera oo muddo 4 maalmood ah ay ku xiran yihiin, waxayna sheegeen in u diyaar garoobi lahaayeen waxbarashadii, qaarkoodna u bilowday sanad dugsiyeedkii.
Hay’ada Xaquuqal Insaanka Somaliland ayaa war ay ka soo saartay xaalada Gabdhahan ayaa dalabtay in si cadaalad ah lagu dhammeeyo kiiskan, lana soo gabagabeeyo.
Somaliland ayaa dagaal kula jira Calanka Somalia, waxaana xabsiyadeeda ku jira dad u badan haween oo Calanka Soomaaliya siyaabo kala duwan taageero ugu muujiyey.
Previous articleXOG: Sidee mar kale kusoo baxay Guddoomiyihii hore ee Guddiga Doorashada? (Yaa watay Cirro & Shuluq..)
Next articleGuddiga Doorashada Maamulka K/Galbeed oo doortay Guddoomiye iyo ku xigeen (Akhriso)